Guddoomiyihii maxkamada gobolka ee magaalada Hargeysa C/rashiid Duraan oo saaka la dhaawacay
June 11, 2012 - Written by Hargeysa:- Waxaa saaka koox hubaysan oo dhalinyaro ah ay toogteen guddoomiyihii maxkamada gobolka ee magaalada Hargeysa C/rashiid Duraan xili uu ka baxay Masjid ku yaal xaafada New Hargeysa oo ah xaafada uu degnaan Guddoomiyuhu. Gudoomiyihii maxkamada gobolka ee Hargeysa C/rashiid Duraan ayaa waxaa gaaray dhaawac culus oo ka soo gaaray Qoorta iyo caloosha.
Kooxdaan dhalinyarada ah ee hubaysan ayaa hadafkooda waxaa uu ahaa in ay khaarajiyaan gudoomiyihii maxkamada gobolka ee Hargeysa C/rashiid Duraan iyagoo markii ay dhaawaceen goobta ka baxsaday. Ciidanka amaanka magaalada Hargeysa ayaa soo gaaray goobta waxaana ay bilaabeen howl galo lagu raadinayo kooxdii falkaaas ka danbaysay.
Dilalka qorshaysan ee lala eegto Masuuliyiinta ka tirsan maamulka ama saraakiisha ayaa inta badan waxaa ay ka dhici jireen magaalooyin ka Boosaaso iyo Gaaalkacyo walow hadda ay yaraadeen ilaa wixii ka danbeeyey dilkii foosha xumaa ee kooxda amniyaadka ee ururka Al-shabaab ay ugu geysteen Allaha u naxariistee Sh Dr Axmed Xaaji Cabdiraxmaan sidda ay arrinkaas saxaafada u xaqiijiyeen Ehelada Shiikha iyo culimad soomaaliyeed ee ku nool magaalada Boosaaso.
Ilaa hadda ma cadda u jeeda ka danbaysa isku dayga dilka ah ee la doonayey in lagu khaarajiyo gudoomiyihii maxkamada gobolka ee Hargeysa C/rashiid Duraan balse saacadaha soo socda ayaa la ogaan doonaa.